तपाइको ब्लड प्रेसर ‘लो’ छ ? उसोभए यस्ता खानाको कम मात्रामा सेवन गर्नुहोस्, – News Nepali Dainik
तपाइको ब्लड प्रेसर ‘लो’ छ ? उसोभए यस्ता खानाको कम मात्रामा सेवन गर्नुहोस्,
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ११, २०७७ समय: १९:४८:३८
*#*उच्च रक्तचाप भएजस्तै कतिपयलाई ब्लड प्रेसर लो हुने गर्छ। रक्तचाप न्यून भएका बिरामीहरूलाई पनि समान हेरचाह र जीवनशैली परिवर्तन आवश्यक पर्छ भन्नेमा धेरैलाई थाह नहुन सक्छ। तपाई वा तपाईँको कोही आफन्तजन न्यून छ भने तपाईँले निम्न उल्लेखित तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ।
मदिरा त्याग्ने र बढी पानी पिउनेः मदिरा पिउदा रक्तचाप बढ्छ भन्ने धारणा पनि पाइन्छ। हरेक (१०) ग्राम रक्सि पिउदा तपाईको प्रेस १ एमएमएचजीले बृद्धि हुन्छ। तर न्यून रक्तचाप छ भन्दैमा कहिल्यै पनि मदिरा पिउने भूल नगर्नुहोस। अत्यधिक अल्कोहलको मात्राले डिहाइड्रेसन ल्याउछ र झन् रक्तचापको मात्रा घट्छ। बरु प्रर्याप्त मात्रामा पानी पिउनुहोस जसले रक्त प्रबाह सशक्त र तीब्र हुन्छ। शरिरमा पानीको मात्रा बढी भएमा पनि न्यून रक्तचापबाट थोरै मात्रामा भएमा जोगिन सकिन्छ।
Last Updated on: January 24th, 2021 at 7:48 pm